Hirgalinta manhajka cusub ee luuqada Afsoomaliga. - Cakaara News
Hirgalinta manhajka cusub ee luuqada Afsoomaliga.
Jigjiga(CN) khamiis,3 December, 2015 Waxaa lagu soo gabagabeeyay xarunta deegaanka ee jigjiga tababar loo qabtay dhamaan kor-meerayaasha degmooyinka deegaanka, 4 maamul magaalo iyo waliba khabiirada xafiiska waxbarashada DDSI.
Tababarkan oo ay ujeedadiisu ahayd sidii loo xoojin lahaa fulinta hirgalinta manhajka cusub ee luugada afsoomaliga ee fasalada 1 ilaa 8aad,waxaana tababarka soo diyaariyay xafiiska waxbarashada DDSI oo kaashanaya haya’da RTA ayaa waxaa xidhitaankiisii ka hadlay madaxwayne ku xigeenka ahna wasiirka waxbarashada DDSI mudane mawliid haayir xasan.
Wuxuuna madaxwayne ku xigeenku si qoto dheer uga warbixiyay ahmiyada ay leedahay meel-marinta manhajka cusub iyo in deegaanka si buuxda looga dhaqan galiyo,waxaa kale oo uu ka warbixiyay in dhamaanba hogaaminta waxbarashada looga baahan yahay fulinta qorshayaasha horumarineed ee dhinaca waxbarashada ee uu ka mid tahay hirgalinta manhajkan cusub ee ay kormeerayaasha mudada tababarka ku qaadanayeen hirgalintiisa, wuxuuna madaxwayne ku xigeenku ku booriyay tababartayaasha in ay ujeedadii tababarkan sidiisa u meelmariyaan.
Dhankiisa gadhwadeenka geedi socodka horumarinta macalimiinta iyo hogaaminta waxbarashada ee xafiiska waxbarashada DDSI mudane farxaan cabdi makhtal ayaa sheegay nuxurka uu xambaarsanaa tababarkani kaasi oo sheegay in mudadii uu socday tababarkani lagu qaadanayay sidii kor-meerayaasha waxbarashada fahan buuxa looga siin lahaa jihooyinka lagu hirgalinayo manhajka cusub ee afsoomaliga iyo guud ahaanba xoojinta nidaamka baris-barasho ee degmooyinka iyo maamulada magaalooyinka DDSI.;
Qaarka mid ah tababartayaashii loo soo xidhay tababarka oo la hadlayay warbaahinta deegaanka ayaa sheegay in ay fahan buuxa oo ay ku meelmarinayaan hirgalinta manhajkan ka haleen intii uu socday marka ay degmooyinkii ku noqdaana u hirgalinayaan tubtii loogu talagalay wuxuuna tababarkani socday mudo 5 maalmood ah.